नेपाल ट्रस्टको कार्यालय भाडामा दिँदा आर्बौँ अनियमितता|Bishwa Ghatana
४ वैशाख २०७५ ,काठमाडौँ :नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँंदा ५ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ।
आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन समितिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेकोमा ट्रस्टले १ अर्ब ५२ करोड ४० लाख ५२ हजारमा सम्झौता गरी ५ अर्ब घोटाला गरेको हो । , यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ । नागरिक दैनिक
अनुदानको चामल विक्रीमा अनियमितता, ३७ सय पर्नेलाई १५ हजार !
पहिलो समाचारअमेरिका-चीन व्यापार विवाद : घाटा कसलाई ? अर्को समाचार‘ध्रुवे’ हात्तीको अनौठो प्रेमले चितवन निकुञ्जमा तनाव